ကျော်ဟိန်း ရဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ အကယ်ဒမီ ၃ ဆုရှင်မင်သမီး ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် – Tameelay
ကျော်ဟိန်း ရဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ အကယ်ဒမီ ၃ ဆုရှင်မင်သမီး ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
အကယ်ဒမီ သုံးဆုရှင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဆိုတာ? ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်း များမှစတင်၍ ယနေ့အချိန်အထိ ထွန်းအိန္ဒြာဗို မှာ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ၌သာမက တေးဂီတလောက၌ပါ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် များထဲတွင်တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၁၉၆၆ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်တွင် ဖခင် ဦးခင်မောင်သိန်းနှင့် မိခင်ဒေါ်ခင်မြမြတို့မှ မိုးကုတ်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်နာ မည်မှာ မိမိခိုင်ဖြစ်ပြီး အကိုတစ်ဦး၊ ညီမတစ်ဦးရှိသည်။ သူမ၏မိသားစုမှာ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းကို လုပ် ကိုင်သော်လည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာ ၌သာ ဝါသနာ ပါခဲ့သည်။ ရှေ့နေ့ဘာသာ (Law) ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိဖြင့် Law Major ၏ Queen ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
သင်မသိသေးသော ထွန်းအိန္ဒြာဗို အကြောင်း
အသက်လေးနှစ်အရွယ်မှစ၍ မြန်မာသီချင်း များစတင်သီဆို တတ်လာပြီး အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင် stage များ၌စတင်သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကာလများတွင် နာမည်ကျော် အဆိုတော် ဇော်ဝင်ရှိန် ၏ ရှိုးပွဲ များ၌ ကော်နီ၊ ခင်မြတ်မွန်တို့နှင့်အတူ နောက်ခံဟာမိုနီအဖြစ်သီဆိုရင်း တေးဂီတလောကသို့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ်အောင်မြင်မှုရရှိရန်ခက်ခဲနေစဉ်အတွင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုမှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ၏ တိုက်တွန်းမှုအရ ရုပ်ရှင် ဘက်သို့စတင်ကူး ပြောင်းရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စူပါမင်းသား ရန်အောင်နှင့် တွဲဖက်၍ ‘ကြေးစားနှလုံးသား’ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွင် စတင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ကိုကိုနဲ့ပဲနေချင်တယ် (၁၉၉၂) ၊ ရင်လှိုင်းခတ်သံ (၁၉၉၂) ၊ အမုန်းလိပ်ပြာ (၁၉၉၃) မိုးယံသို့လွင့်ပျံသော (၁၉၉၃)၊ အရာရာမင်းပါမေ(၁၉၉၄) စသည့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများဖြင့် လူသိများလာခဲ့သည်။ မင်းသမီး တစ်ယောက်အဖြစ် အထိုက်အလျောက်အောင် မြင်မှုရပြီးသည့်အချိန်ကျမှ တေးဂီတလောက၌ နေရာတခုရရှိအောင်ပြန်လည်ကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် ၁၉၉၃ခုနှစ် တွင် ‘မင်းအတွက်ပဲ’ တစ်ကိုယ်တော် အယ်ဘမ် ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မင်းအတွက်ပဲ စီးရီးသည်အထူးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာခေတ်ပေါ်တေးဂီတလောကတွင် ‘ထွန်းအိန္ဒြာဗို’ ဟူ၍ နာမည်တ စ်လုံးကိုခိုင်ခိုင်မာ မာထူထောင်ပေးခဲ့သည်။
ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၏ သရုပ်ဆော င်ပိုင်းအစောပိုင်းကာလတွင် စူပါစတား မင်းသမီး မို့မို့မြင့်အောင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည့် မင်းသမီး ဟု ပရိသတ် များကသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း မင်းသမီး မဖြစ်ခင်ကပင် မို့မို့မြင့်အောင် ၏ ပရိသတ် ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် မို့မို့မြင့်အောင် နှင့်ဆင်တူသည်ဟု အပြောခံရသည်ကို ဂုဏ်ယူနေခဲ့သည်။ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၏ အစောပိုင်းကာလဇာတ်ကားအများစုတွင် မို့မို့မြင့်အောင် ၏အိုက်တင်အတိုင်းတု ပသရုပ်ဆောင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် ကျော်ဟိန်းက ‘သူများ၏အမူအရာကို တုပရင်ထိပ်ဆုံးကိုဘယ် တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး၊ ဒုတိယလူသည် ပထမ မဖြစ်နိုင်ဘူး’ ဟုဆို၍ ထွန်းအိန္ဒြာ၏အမူအရာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ကျော်ဟိန်း ၏ စကားအတိုင်းပင်သူမသည် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းရော ဖက်ရှင်ပိုင်း ပါ အခြား မင်းသမီး များနှင့် လုံးဝမတူအောင် စတင်ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ် မင်းသမီး အများစုက ဆံပင်ရှည်ရှည်ထား၍မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားနေချိန် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် ဆံပင်ပုံစံများ ဖက်ရှင်များဖြင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်။ ခြား မင်းသမီး များကရိုးသားသိမ် မွေ့သောအသနားခံဇာတ်ရုပ်များ သရုပ်ဆောင်နေချိန် သူမက ဂျစ်ကန်ကန်နိုင်သော အထက်စီးဆန်သော ဇာတ်ရုပ်များရွေးချယ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်စာရေးဆရာမလွန်းထားထား၏ ဇာတ်ရုပ် အမာများကို ဒွေး နှင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို တို့က အများဆုံးသရုပ်ဆောင်ကြသည်။ လွန်ထားထား၏ နာမည်ကျော် ဝတ္ထု ကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးသည့်မာယာရထား ရုပ်ရှင်တွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၏ နက်နက်နွယ် အဖြစ် ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ် ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့မှု ကြောင့်ပရိသတ် အထူးလက်ခံအားပေးခဲ့ကြသည်။ ထွန်းအိန္ဒြာဗို သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းကိုတစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့သည့် မင်းသမီးဟု မီဒီယာအများစုကသတ်မှတ်ကြသည်။ ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းအရောက်တွင်ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏ သီချင်းဗီစီဒီများ ၊ ရုပ်ရှင်ကားများ၌တွေ့ရလေ့ရှိသော အဆင်အပြင်များ ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပန်အမူအရာများမှာ မြန်မာ့ အမျိုးသမီးထု ကို အတော်ပင်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၄ခုနှစ်တွင်သူငယ်ချင်းလို့ပဲဆက်၍ ခေါ်မယ် ခိုင် ရုပ်ရှင်ကား ၌ မို့မို့မြင့်အောင်၏ ညီမ နိုင် ဇာတ်ကောင်နေရာကပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ကျော်သူ၊မို့မို့မြင့်အောင်နှင့်တွဲဖက်၍ ပန်းအိပ်မက် ရုပ်ရှင်ကား၌ ဒုတိယနေရာကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဇာတ်ကားနှစ်ကားလုံးတွင် သူမ၏ idol ဖြစ်သည့် မို့မို့မြင့်အောင်နှင့် တွဲဖက်ရိုက်ကူးရသည့်အတွက် အလွန်ပျော်ရွှင်မိကြောင်း ၊ မို့မို့မြင့်အောင်လောက် မလှသလို အိုက်တင်ပိုင်း၌လည်း လိုအပ်ချက်များရှိသေးသည့်အတွက် ပရိသတ်များ ဖြည့်စွက်ကြည့်ပေးကြပါရန် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ထိုခေတ်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဖြေဆိုဖူးသည်။ဗီဒီယို ဇာတ် ကားများဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များစွာ၌ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် နှောင်းတမြေ့မြေ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် သူမဘဝ၏ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ပရိသတ်များ ၊ မီဒီယာ များက အိမ်ထောင်ရေး ဒရာမ ဇာတ်ကား ‘ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ’ ဖြင့် အကယ်ဒမီ တစ်ကြိုပေးခဲ့သော်လည်း နှောင်းတမြေ့မြေ့ဖြင် မမျှော်လင့်ဘဲ အကယ်ဒမီ ရသွားသည့်အတွက် သရုပ်ဆောင် မကောင်းဘဲရသွားသလို ခံစားခဲ့မိသည်ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗို က၂၀၁၆ ခုနှစ် Lets Talk အစီအစဉ်တွင် ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။နှောင်းတမြေ့မြေ့ ဇာတ်ကားသည် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၏သရုပ်ဆောင် လမ်းကြောင်းတွင် မှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက် ထူပေးခဲ့သလို ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ ဇာတ်ကား သည်သူမအားအနုပညာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာထူ ထောင်ပေးခဲ့သော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
မင်းသမီး အဖြစ်အောင်မြင်မှုရရှိနေချိန် တစ်ဖက်တွင်လည်း အိပ်မက်ညများ ၊ ရည်းစားဦး စသည့် တေးစီးရီးများမှာ ပရိသတ်များအကြား ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်1999 အမည်ရှိတေးအယ်ဘမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ရောင်းအားအကောင်းဆုံးတေးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုကာလတလျှောက် ထွန်းအိန္ဒြာဗို မှာ ရုပ်ရှင်ရော တေးဂီတဘက်၌ပါ ကြီးမားသော အောင်မြင်မှု ရရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်တွင် တေးသံရှင် မျိူးကျော့မြိုင်နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့ကြပြီး မကြာမီပင်နှစ်ဦးတူသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့သည်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုနှင့်မျိူးကျော့မြိုင်တို့ လမ်းမခွဲ မီအချေအတင်း စကားများကြသည့် အသံဖိုင် မှာ ထိုခေတ်ကပြည်သူများအကြား အတော်ပင် ဂယက်ထသွားသေးသည်။
သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ရှိ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကိုအောင်မင်းထွန်းနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်စရာအိမ် ထောင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။၂၀၀၀ ကာလအတွင်း မို့မို့မြင့်အောင် မှာ အနုပညာ လှုပ်ရှာမှုနည်းနေပြီး မေသန်းနု မှာ အမေ ဇာတ်ရုပ် များ၌ စတင်သရုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်သော်လည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး တစ်လက်အဖြစ် ထက်ထက်မိုးဦး ၊ နန္ဒာလှိုင်စသည့် နောင်တက်မင်းသမီးများနှင့်အပြိုင် ဇာတ်ကား များစွာ၌ သရုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၀ ဆယ်စုနှစ်၏ အထင်ကရဇာတ်ကားများဖြစ်သော အမေ့နို့ဖိုး ၊ တစ်ခါကဧရာဝတီညများ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍ စသည့် ဇာတ်ကား များ၌လည်းပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားသည်။ ထို့အပြင်၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဒိုင်ယာရီ တစ်ကိုယ်တော် Live Show ကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာ့တေးဂီတ လောကတွင်စံချိန်သစ်တင်ရလောက်အောင် လက်မှတ်ရောင်းချမှုအများဆုံးနှင့် ဝင်ငွေအများ ဆုံးရရှိသော Concert တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Live Show ကို အခွေအဖြစ် ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင်လည်းအချပ်ရေပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ ရောင်းချရသည့်အပြင် ထိုနှစ်၏City FM ဆုပေးပွဲတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး တေးအယ်ဘမ်ဆုနှင့် ရေပန်းအစားဆုံးအမျိူးသမီးတေးသံရှင်ဆုရရှိခဲ့သည် ။၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အမေ့နို့ဖိုးရုပ်ရှင်ကားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် အမျိူးသမီးဇတ်ဆောင်ဆုရရှိသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍ ဇာတ်ကားဖြင့် တတိယအကြိမ် အမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုရရှိသည်။မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍ ရုပ်ရှင်တွင် ပညာတတ် စိတ္တဇ ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဟန်မှာမြန်မာ့ရုပ်ရှင်၏ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်များအနက် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သလို အလွန်ခက် ခဲသော ဇာတ်ရုပ်တစ်ခုဟုလည်း ရုပ်ရှင်ပညာရှင်အများစ်ုကသတ်မှတ်ကြသည်။
၂၀၀၀ နှောင်းပိုင်းမှစ၍ ၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင်သဘာဝမင်းသမီးတလက် အဖြစ်ကူးပြောင်းခဲ့ပြီးကျောက်စက်ရေ၊ ကြိုးတန်း၊ နေဝင်အိပ်တန်း တက် အစရှိသည့် အောင်မြင်သော ဇာတ်ကားများစွာ၌ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မျိူးဆက်သစ်အနုပညာရှင်များ၏ လေးစားစံပြုရသော ဝါရင့်မင်းသမီးကြီးတစ်လက်အဖြစ်တည် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုသည် မြန်မာ့အနုပညာလောက၏ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးနှင့် အထူးချွန်ဆုံးအမျိူးသမီးစူပါစတားများအနက် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင် ပိုင်း၌သာမက တေးဂီတလောက၌ပါ အောင်မြင်မှုခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားနိုင်သည့်အပြင်အများနှင့်မတူသောကိုယ်ပိုင်စတိုင် ကိုယ်ပိုင်ဟန်များဖြင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသူလည်းဖြစ်သည်။ သူမ၏ ရုပ်ရှင်ကားများ၌သာမက အပြင်လောက၌ပါ တွေ့ရလေ့ရှိသော ယုံကြည်မှုမြင့်မားသော ပညာတတ်မိန်းမတစ်ဦးအဖြစ် မှန်တယ် ထင်ရာကိုရဲဝံ့စွာလုပ်ကိုင်တတ်မှု ၊ professional ဆန်သောပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံမှုများကြောင့် ပညာတတ်အမျိူးသမီးအများစု၏ idol တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
မျိူးဆက်သစ်အနုပညာရှင်များ၏ လေးစားအတုယူခြင်းခံရသော အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို သူမ၏ အပျိူ စင်ဘဝ၌သာမက အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၊ မိခင်ဘဝတိုင်အောင်ရှည်လျားလှသော အောင်မြင်မှုများကြောင့် မြန်မာ့အနုပညာလောက၏ Evergreen ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်း ဖြစ်သည်။ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏ အောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်၌မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက၏ သရုပ်ဆောင်ကြေးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးဖြစ်သလို ဇာတ်ဂျီးအများဆုံး မင်းသမီးများတွင်လည်းတစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏အား သာချက်မှာမတူညီသော ဇာတ်ရုပ်ပေါင်းများစွာကိုသဘာဝနှင့်အနီးစပ်ဆုံးပုံဖော်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို ထူးခြားသောဇာတ်ရုပ်များကိုလည်း စိန်ခေါ်သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ သူမ၏ ကြာရှည်သောအောင်မြင်မှုသက်တမ်း၊ပရိသတ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှု ၊ ထူးခြားသော အနုပညာအရည်အသွေးများကြောင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုမှာလည်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရော ဂီတဘက်၌ပါ မှတ်တမ်းတင်အပ်သည့် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများ
၁၉၉၄- သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင်
( ကျော်သူ မို့မို့မြင့်အောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ကျော်ရဲအောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( စိုးသူ ရန်အောင် မေသဉ္ဇာဦး ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
၁၉၉၇- ကြေမွသွားသော တိမ်တိုက်များအကြောင်း
( ဒွေး ချို ပြုံး ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
– သူတို့ခေတ်နှင့် သူတို့အရွယ်( ကျော်သူ ရန်အောင် ရဲအောင် ကျော်ရဲအောင် လွင်မိုး
မို့မို့မြင့်အောင် မေသန်းနု စိုးမြတ်သူဇာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို
– ရင်ခွင်နန်းတော် ( ဒွေး ထွန်းအိန္ဒြာဗို နန္ဒာလှိုင် )
( လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို နန္ဒာလှိုင် )
– ကျွန်တော် ကျွန်မတို့သည်
(ထွန်းအိန္ဒြာဗို မျိုးသန္တာထွန်း ရီဝေယံ အိန္ဒြာကျော်ဇင်)
( ရန်အောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ရန်အောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို လူမင်း )
( စိုးသူ မေသန်းနု ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိဖြူ စိုး )
( ရန်အောင် စိုးသူ ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( စိုးသူ ရဲအောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို တင့်တင့်ထွန်း )
– မချစ်တတ်သောမိန်းမ အချစ်ငတ်သောယောကျာ်း
( လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
– ကြည်ပြာရောင် နဂ္ဂတစ်များ
( ဒွေး လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို ထက်ထက်မိုးဦး )
( မင်းမော်ကွန်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို စိုးမြတ်နန္ဒာ )
( ရန်အောင် လူမင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို စိုးမြတ်နန္ဒာ )
၂၀၀၂- သင်ချစ်လျှင် ကျွန်ုပ်မမုန်းပါ
– မပြောင်းလဲသော အကြောင်းတရားများ
( လွင်မိုး နေအောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
– စပျစ်ချိူ နှင့်ချယ်ရီဝိုင်
( လူမင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို စိုးမြတ်နန္ဒာ )
( ရန်အောင် လူမင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို စိုးမြတ်နန္ဒာ
( လူမင်း ခင်သန်းနု ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ရာဇာနေဝင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( လူမင်း သီဟတင်စိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို မေသန်းနု
( ဒွေး ထွန်းအိန္ဒြာဗို ကြည်လဲ့လဲ့ဦး )
( ရန်အောင် ဒွေး ထွန်းအိန္ဒြာဗို နန္ဒာလှိုင် )
– ညှို့သောပင်လယ် ဆွဲငင်သောလမင်း
( ဒွေး ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ဒွေး ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
( ဒွေး ကျော်ရဲအောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို မြင့်မြင့်ခိုင်
– ယောက်ဖတော်ခါနီးရင် စဉ်းစားဖို့လိုတယ်
( ရန်အောင် လွင်မိုး ရာဇာနေဝင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို
( ရာဇာနေဝင်း ဖြိုးငွေစိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
( မင်းမော်ကွန်း ကျော်သူ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ချို ပြုံး )
( လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို မေသန်းနု )
( လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို ခိုင်သင်းကြည် )
– ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းသိက္ခာ
( ရန်အောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
( လွင်မိုး ဝေဠုကျော် ထွန်းထွန်းဝင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို
စိုးမြတ်နန္ဒာ မျိူးသန္တာထွန်း ခင်ဇာခြည်ကျော် မြင့်မြင့်ခိုင်)
( ကျော်သူ ဖိုးသောကြာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို မေသန်းနု
(ကျော်ဟိန်း ကျော်ရဲအောင် စိုးမြတ်သူဇာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို)
( ခန့်စည်သူ ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ရန်အောင် ဟိန်းဝေယံ ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိန္ဒြာကျော်ဇင်)
( မြင့်မြတ် မေသန်းနု စိုးမြတ်သူဇာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( နေတိုး ရန်အောင် သက်မွန်မြင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
– ဟတ်ထိတယ် ၂
( ရန်အောင် ရဲအောင် သူထူးစံ မိုးအောင်ရင် မေသန်းနု
ထွန်းအိန္ဒြာဗို သင်ဇာဝင့်ကျော် မိုးယုစံ )
( ခန့်စည်သူ သက်မွန်မြင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ဟိန်းဝေယံ ရဲအောင် မေသန်းနု ထွန်းအိန္ဒြာဗို
( ဟိန်းဝေယံ နေအောင် နဝရတ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ဟိန်းဝေယံ ရန်အောင် ရဲအောင် စိုးပြည့်သဇင်
မေသန်းနု ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ပြေတီဦး ခန့်စည်သူ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
– ချစ်စံအိမ် ၂၀၂၈
( လူမင်း ပြေတီဦး နေတိုး မင်းမော်ကွန်း မြင့်မြတ်
ထွန်းထွန်း နေမင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မိုးဟေကို ဝတ်မှုန်ရွှေရည် စိုးပြည့်သဇင် သင်ဇာ
ဝင့်ကျော် ချစ်သုဝေ )
– ရပ်ကွက်ဘုရင်မ ၂
( မို့မို့မြင့်အောင် စိုးမြတ်သူဇာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို
ခိုင်သင်းကြည် အေးမြတ်သူ )
( ကျော်ထက်အောင် စိုးမြတ်သူဇာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို
( ပြေတီဦး ပိုင်ဖြိုးသု ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
( ပြေတီဦး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို မေကဗျာ )
ထွန်းအိန္ဒြာဗို အနုပညာသက်တမ်းတလျှောက် ထွက်ရှိခဲ့သော တေးစီးရီးများ
၁. ကန္တာရကဖီး ( +ရင်ဂို +အဲလက်စ် )
၂. ဆုံနိုင်ခွင့် ( +အဲလက်စ် )
၃. သုံးယောက်စကား ( +တင်ဇာမော် +မဒီ )
၄. မုန်းလို့မရတဲ့ချစ်သူ ( + ဒွေး )
၅. မျက်စိမှိတ်ပြီးချစ်လိုက်ပါ ( +တင်ဇာမော် )
၆. တကယ်မချစ်ဘဲနဲ့ ( + မျိူးကျော့မြိုင် )
၁. အပိုင်းအစ ၁.၅
၂. အဖြူ ရောင်တမ်းချင်းသို့
၃. မိတော့မမိဘူး ( L ခွန်းရီ Live Show )
၆. Alphine သင်္ကြန်
၇. Lu Min Wedding
၈. Romanson Live Show
၉. City FM
ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရရှိခဲ့သော ထူးချွန်ဆုများ
၁. အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – နှောင်းတမြေ့မြေ့ ( ၁၉၉၉ )
၂. အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – အမေ့နို့ဖိုး ( ၂၀၀၃ )
၃. အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍ ( ၂၀၀၅ )
၄. City FM 2002 – ရေပန်းအစားဆုံးအမျိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှင်ဆု
၅. City FM 2003 – အရောင်းရဆုံးစတူဒီယိုတေးအယ်ဘမ်ဆု ( နှစ်ယောက်မရှိဘူး )
၆. City FM 2003 – ရေပန်းအစားဆုံး အမျိူးသမီးစ တူဒီယိုတေးသံရှင်ဆု
၇. City FM 2004 – အရောင်းရဆုံး စတူဒီယို တေးအယ်ဘမ်ဆု ( ဒိုင်ယာရီ )
၈. City FM 2004 – ရေပန်းအစားဆုံးအမျိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှင်ဆု
၉. City FM 2005 – ရေပန်းအစားဆုံးအမျိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှင်ဆု။
သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ အရမ်းပီပြင်လွန်းလှတဲ့ မင်းသမီး တယောက်ပါ။
မခိုင်ကြီးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြိုက်ကြရဲ့လား? သီချင်းတွေဟာလည်း ခုချိန်ထိ လူကြိုက်များရှင်သန်နေဆဲနော် ချစ်သေးရဲ့လား?
Share from Lwin Pyin
သငျမသိသေးသော ထှနျးအိန်ဒွာဗို အကွောငျး
အကယျဒမီ သုံးဆုရှငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို ဆိုတာ? ၁၉၉၀ နှောငျးပိုငျး မြားမှစတငျ၍ ယနအေ့ခြိနျအထိ ထှနျးအိန်ဒွာဗို မှာ မွနျမာ့ ရုပျရှငျ ၌သာမက တေးဂီတလောက၌ပါ အအောငျမွငျဆုံး အမြိုးသမီး အနုပညာရှငျ မြားထဲတှငျတဈဦးအပါအဝငျ ဖွဈနဆေဲဖွဈသညျ။ ၁၉၆၆ခုနှဈ မလေ ၁ ရကျတှငျ ဖခငျ ဦးခငျမောငျသိနျးနှငျ့ မိခငျဒျေါခငျမွမွတို့မှ မိုးကုတျမွို့တှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ ငယျနာ မညျမှာ မိမိခိုငျဖွဈပွီး အကိုတဈဦး၊ ညီမတဈဦးရှိသညျ။ သူမ၏မိသားစုမှာ ကြောကျမကျြရတနာလုပျငနျးကို လုပျ ကိုငျသျောလညျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို မှာ ငယျစဉျကတညျးက အနုပညာ ၌သာ ဝါသနာ ပါခဲ့သညျ။ ရှနေ့ဘေ့ာသာ (Law) ဖွငျ့ ဘှဲ့ရရှိဖွငျ့ Law Major ၏ Queen ဖွဈခဲ့ဖူးသညျ။
အသကျလေးနှဈအရှယျမှစ၍ မွနျမာသီခငျြး မြားစတငျသီဆို တတျလာပွီး အသကျ ၁၁ နှဈအရှယျတှငျ stage မြား၌စတငျသီဆိုဖြျောဖွခေဲ့သညျ။ ၁၉၈၀ ခုနှဈကာလမြားတှငျ နာမညျကြျော အဆိုတျော ဇျောဝငျရှိနျ ၏ ရှိုးပှဲ မြား၌ ကျောနီ၊ ခငျမွတျမှနျတို့နှငျ့အတူ နောကျခံဟာမိုနီအဖွဈသီဆိုရငျး တေးဂီတလောကသို့စတငျဝငျရောကျလာခဲ့သညျ။ အဆိုတျော တဈဦးအဖွဈအောငျမွငျမှုရရှိရနျခကျခဲနစေဉျအတှငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗိုမှာ မိတျဆှေ သူငယျခငျြး မြား၏ တိုကျတှနျးမှုအရ ရုပျရှငျ ဘကျသို့စတငျကူး ပွောငျးရနျပွငျဆငျခဲ့သညျ။ သရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈ၁၉၉၁ ခုနှဈတှငျ စူပါမငျးသား ရနျအောငျနှငျ့ တှဲဖကျ၍ ‘ကွေးစားနှလုံးသား’ ဗီဒီယို ဇာတျကား တှငျ စတငျ သရုပျဆောငျ ခဲ့သညျ။
ဆကျလကျ၍ ကိုကိုနဲ့ပဲနခေငျြတယျ (၁၉၉၂) ၊ ရငျလှိုငျးခတျသံ (၁၉၉၂) ၊ အမုနျးလိပျပွာ (၁၉၉၃) မိုးယံသို့လှငျ့ပြံသော (၁၉၉၃)၊ အရာရာမငျးပါမေ(၁၉၉၄) စသညျ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားမြားဖွငျ့ လူသိမြားလာခဲ့သညျ။ မငျးသမီး တဈယောကျအဖွဈ အထိုကျအလြောကျအောငျ မွငျမှုရပွီးသညျ့အခြိနျကမြှ တေးဂီတလောက၌ နရောတခုရရှိအောငျပွနျလညျကွိုးစားသညျ့အနဖွေငျ့ ၁၉၉၃ခုနှဈ တှငျ ‘မငျးအတှကျပဲ’ တဈကိုယျတျော အယျဘမျ ကိုပထမဆုံးအကွိမျထုတျဝခေဲ့သညျ။ မငျးအတှကျပဲ စီးရီးသညျအထူးအောငျမွငျမှုရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာခတျေပျေါတေးဂီတလောကတှငျ ‘ထှနျးအိန်ဒွာဗို’ ဟူ၍ နာမညျတ ဈလုံးကိုခိုငျခိုငျမာ မာထူထောငျပေးခဲ့သညျ။
ထှနျးအိန်ဒွာဗို ၏ သရုပျဆော ငျပိုငျးအစောပိုငျးကာလတှငျ စူပါစတား မငျးသမီး မို့မို့မွငျ့အောငျနှငျ့ ခပျဆငျဆငျတူသညျ့ မငျးသမီး ဟု ပရိသတျ မြားကသတျမှတျခဲ့ကွသညျ။ သူမကိုယျတိုငျလညျး မငျးသမီး မဖွဈခငျကပငျ မို့မို့မွငျ့အောငျ ၏ ပရိသတျ ဖွဈခဲ့သောကွောငျ့ မို့မို့မွငျ့အောငျ နှငျ့ဆငျတူသညျဟု အပွောခံရသညျကို ဂုဏျယူနခေဲ့သညျ။ ထှနျးအိန်ဒွာဗို ၏ အစောပိုငျးကာလဇာတျကားအမြားစုတှငျ မို့မို့မွငျ့အောငျ ၏အိုကျတငျအတိုငျးတု ပသရုပျဆောငျသညျကိုတှနေို့ငျသညျ။ သို့သျော ကြျောဟိနျးက ‘သူမြား၏အမူအရာကို တုပရငျထိပျဆုံးကိုဘယျ တော့မှမရောကျနိုငျဘူး၊ ဒုတိယလူသညျ ပထမ မဖွဈနိုငျဘူး’ ဟုဆို၍ ထှနျးအိန်ဒွာ၏အမူအရာကိုပွောငျးလဲပဈရနျ ရနျတိုကျတှနျးခဲ့သညျ။
ကြျောဟိနျး ၏ စကားအတိုငျးပငျသူမသညျ သရုပျဆောငျပိုငျးရော ဖကျရှငျပိုငျး ပါ အခွား မငျးသမီး မြားနှငျ့ လုံးဝမတူအောငျ စတငျခှဲထှကျခဲ့သညျ။ ထိုခတျေ မငျးသမီး အမြားစုက ဆံပငျရှညျရှညျထား၍မွနျမာဆနျဆနျဝတျစားနခြေိနျ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုက အနောကျတိုငျးဆနျဆနျ ဆံပငျပုံစံမြား ဖကျရှငျမြားဖွငျ့ ထိုးဖောကျဝငျရောကျလာသညျ။ ခွား မငျးသမီး မြားကရိုးသားသိမျ မှသေ့ောအသနားခံဇာတျရုပျမြား သရုပျဆောငျနခြေိနျ သူမက ဂဈြကနျကနျနိုငျသော အထကျစီးဆနျသော ဇာတျရုပျမြားရှေးခယျြ သရုပျဆောငျ ခဲ့သညျ။
အထူးသဖွငျ့စာရေးဆရာမလှနျးထားထား၏ ဇာတျရုပျ အမာမြားကို ဒှေး နှငျ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗို တို့က အမြားဆုံးသရုပျဆောငျကွသညျ။ လှနျထားထား၏ နာမညျကြျော ဝတ်ထု ကို ပုံဖျောရိုကျကူးသညျ့မာယာရထား ရုပျရှငျတှငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို ၏ နကျနကျနှယျ အဖွဈ ဗီလိနျ ဇာတျရုပျ ကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျခဲ့မှု ကွောငျ့ပရိသတျ အထူးလကျခံအားပေးခဲ့ကွသညျ။ ထှနျးအိန်ဒွာဗို သညျ မွနျမာ့ရုပျရှငျနှငျ့ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးကိုတဈခတျေဆနျးစခေဲ့သညျ့ မငျးသမီးဟု မီဒီယာအမြားစုကသတျမှတျကွသညျ။ ၁၉၉၀ နှောငျးပိုငျးအရောကျတှငျထှနျးအိန်ဒွာဗို၏ သီခငျြးဗီစီဒီမြား ၊ ရုပျရှငျကားမြား၌တှရေ့လရှေိ့သော အဆငျအပွငျမြား ၊ ကိုယျပိုငျဟနျပနျအမူအရာမြားမှာ မွနျမာ့ အမြိုးသမီးထု ကို အတျောပငျလှမျးမိုးနိုငျခဲ့သညျ။
၁၉၉၄ခုနှဈတှငျသူငယျခငျြးလို့ပဲဆကျ၍ ချေါမယျ ခိုငျ ရုပျရှငျကား ၌ မို့မို့မွငျ့အောငျ၏ ညီမ နိုငျ ဇာတျကောငျနရောကပါဝငျခဲ့သညျ။ ထိုနှဈမှာပငျ ကြျောသူ၊မို့မို့မွငျ့အောငျနှငျ့တှဲဖကျ၍ ပနျးအိပျမကျ ရုပျရှငျကား၌ ဒုတိယနရောကသရုပျဆောငျခဲ့ပွနျသညျ။ ဇာတျကားနှဈကားလုံးတှငျ သူမ၏ idol ဖွဈသညျ့ မို့မို့မွငျ့အောငျနှငျ့ တှဲဖကျရိုကျကူးရသညျ့အတှကျ အလှနျပြျောရှငျမိကွောငျး ၊ မို့မို့မွငျ့အောငျလောကျ မလှသလို အိုကျတငျပိုငျး၌လညျး လိုအပျခကျြမြားရှိသေးသညျ့အတှကျ ပရိသတျမြား ဖွညျ့စှကျကွညျ့ပေးကွပါရနျ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုက ထိုခတျေအငျတာဗြူးတဈခုတှငျဖွဆေိုဖူးသညျ။ဗီဒီယို ဇာတျ ကားမြားဖွငျ့အောငျမွငျမှုရရှိပွီး ရုပျရှငျ ဇာတျကား မြားစှာ၌ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့ရာ ၁၉၉၉ခုနှဈတှငျ နှောငျးတမွမွေ့ေ့ ရုပျရှငျကားဖွငျ့ သူမဘဝ၏ ပထမဦးဆုံး အမြိုးသမီး ဇာတျဆောငျ အကယျဒမီဆုကို ရရှိခဲ့သညျ။
ပရိသတျမြား ၊ မီဒီယာ မြားက အိမျထောငျရေး ဒရာမ ဇာတျကား ‘ရငျထဲကဆောငျးရာသီ’ ဖွငျ့ အကယျဒမီ တဈကွိုပေးခဲ့သျောလညျး နှောငျးတမွမွေ့ဖွေ့ငျ မမြှျောလငျ့ဘဲ အကယျဒမီ ရသှားသညျ့အတှကျ သရုပျဆောငျ မကောငျးဘဲရသှားသလို ခံစားခဲ့မိသညျဟု ထှနျးအိန်ဒွာဗို က၂၀၁၆ ခုနှဈ Lets Talk အစီအစဉျတှငျ ပွနျလညျပွောပွခဲ့သညျ။နှောငျးတမွမွေ့ေ့ ဇာတျကားသညျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို ၏သရုပျဆောငျ လမျးကွောငျးတှငျ မှတျတိုငျတဈခုစိုကျ ထူပေးခဲ့သလို ရငျထဲကဆောငျးရာသီ ဇာတျကား သညျသူမအားအနုပညာ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသောထိပျတနျး ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈ ခိုငျခိုငျမာမာထူ ထောငျပေးခဲ့သော ဇာတျကားဖွဈသညျ။
မငျးသမီး အဖွဈအောငျမွငျမှုရရှိနခြေိနျ တဈဖကျတှငျလညျး အိပျမကျညမြား ၊ ရညျးစားဦး စသညျ့ တေးစီးရီးမြားမှာ ပရိသတျမြားအကွား ရပေနျးစားအောငျမွငျခဲ့သညျ။ ၁၉၉၉ ခုနှဈတှငျ1999 အမညျရှိတေးအယျဘမျထုတျဝခေဲ့ပွီး ရောငျးအားအကောငျးဆုံးတေးစီးရီးတဈခုဖွဈခဲ့သညျ။
ထိုကာလတလြှောကျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို မှာ ရုပျရှငျရော တေးဂီတဘကျ၌ပါ ကွီးမားသော အောငျမွငျမှု ရရှိနခြေိနျဖွဈသညျ။ အောငျမွငျမှုအမွငျ့ဆုံးအခြိနျတှငျ တေးသံရှငျ မြိူးကြော့မွိုငျနှငျ့ ခဈြကွိုးသှယျခဲ့ကွပွီး မကွာမီပငျနှဈဦးတူသဘောတူလမျးခှဲခဲ့သညျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုနှငျ့မြိူးကြော့မွိုငျတို့ လမျးမခှဲ မီအခအြေတငျး စကားမြားကွသညျ့ အသံဖိုငျ မှာ ထိုခတျေကပွညျသူမြားအကွား အတျောပငျ ဂယကျထသှားသေးသညျ။
သို့သျောနောကျပိုငျးတှငျလကျရှိ ခငျပှနျး ဖွဈသူ ကိုအောငျမငျးထှနျးနှငျ့ လကျထပျခဲ့ပွီး ပြျောရှငျစရာအိမျ ထောငျတဈခုကိုတညျဆောကျနိုငျခဲ့သညျ။၂၀၀၀ ကာလအတှငျး မို့မို့မွငျ့အောငျ မှာ အနုပညာ လှုပျရှာမှုနညျးနပွေီး မသေနျးနု မှာ အမေ ဇာတျရုပျ မြား၌ စတငျသရုပျဆောငျနပွေီးဖွဈသျောလညျး ထှနျးအိန်ဒွာဗိုမှာ ခေါငျးဆောငျ မငျးသမီး တဈလကျအဖွဈ ထကျထကျမိုးဦး ၊ နန်ဒာလှိုငျစသညျ့ နောငျတကျမငျးသမီးမြားနှငျ့အပွိုငျ ဇာတျကား မြားစှာ၌ သရုပျဆောငျနဆေဲဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ ၂၀၀၀ ဆယျစုနှဈ၏ အထငျကရဇာတျကားမြားဖွဈသော အမနေို့ဖိုး ၊ တဈခါကဧရာဝတီညမြား မိုးကုပျစကျဝိုငျးကိုကြျောလှနျ၍ စသညျ့ ဇာတျကား မြား၌လညျးပါဝငျ သရုပျဆောငျ ထားသညျ။ ထို့အပွငျ၂၀၀၃ ခုနှဈတှငျ ဒိုငျယာရီ တဈကိုယျတျော Live Show ကငျြးပခဲ့ပွီးမွနျမာ့တေးဂီတ လောကတှငျစံခြိနျသဈတငျရလောကျအောငျ လကျမှတျရောငျးခမြှုအမြားဆုံးနှငျ့ ဝငျငှအေမြား ဆုံးရရှိသော Concert တဈခုဖွဈခဲ့သညျ။
အဆိုပါ Live Show ကို အခှအေဖွဈ ပွနျလညျရောငျးခရြာတှငျလညျးအခပျြရပေေါငျးသနျးနှငျ့ခြီ၍ ရောငျးခရြသညျ့အပွငျ ထိုနှဈ၏City FM ဆုပေးပှဲတှငျရောငျးအားအကောငျးဆုံး တေးအယျဘမျဆုနှငျ့ ရပေနျးအစားဆုံးအမြိူးသမီးတေးသံရှငျဆုရရှိခဲ့သညျ ။၂၀၀၃ ခုနှဈတှငျ အမနေို့ဖိုးရုပျရှငျကားဖွငျ့ ဒုတိယအကွိမျ အမြိူးသမီးဇတျဆောငျဆုရရှိသညျ။ ဆကျလကျ၍ ၂၀၀၅ခုနှဈတှငျ မိုးကုတျစကျဝိုငျးကိုကြျောလှနျ၍ ဇာတျကားဖွငျ့ တတိယအကွိမျ အမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆုရရှိသညျ။မိုးကုတျစကျဝိုငျးကိုကြျောလှနျ၍ ရုပျရှငျတှငျ ပညာတတျ စိတ်တဇ ရောဂါဝဒေနာရှငျတဈဦးအဖွဈ သရုပျဆောငျဟနျမှာမွနျမာ့ရုပျရှငျ၏ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျခကျြမြားအနကျ တဈခု အပါအဝငျဖွဈသလို အလှနျခကျ ခဲသော ဇာတျရုပျတဈခုဟုလညျး ရုပျရှငျပညာရှငျအမြားဈုကသတျမှတျကွသညျ။
၂၀၀၀ နှောငျးပိုငျးမှစ၍ ၂၀၁၀ ဆယျစုနှဈအတှငျးတှငျသဘာဝမငျးသမီးတလကျ အဖွဈကူးပွောငျးခဲ့ပွီးကြောကျစကျရေ၊ ကွိုးတနျး၊ နဝေငျအိပျတနျး တကျ အစရှိသညျ့ အောငျမွငျသော ဇာတျကားမြားစှာ၌ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး မြိူးဆကျသဈအနုပညာရှငျမြား၏ လေးစားစံပွုရသော ဝါရငျ့မငျးသမီးကွီးတဈလကျအဖွဈတညျ ရှိနဆေဲဖွဈသညျ။
ထှနျးအိန်ဒွာဗိုသညျ မွနျမာ့အနုပညာလောက၏ လှမျးမိုးမှုအရှိဆုံးနှငျ့ အထူးခြှနျဆုံးအမြိူးသမီးစူပါစတားမြားအနကျ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈသညျ။ သရုပျဆောငျ ပိုငျး၌သာမက တေးဂီတလောက၌ပါ အောငျမွငျမှုခိုငျခိုငျမာမာစိုကျထူထားနိုငျသညျ့အပွငျအမြားနှငျ့မတူသောကိုယျပိုငျစတိုငျ ကိုယျပိုငျဟနျမြားဖွငျ့ ထိုးဖောကျဝငျရောကျလာသူလညျးဖွဈသညျ။ သူမ၏ ရုပျရှငျကားမြား၌သာမက အပွငျလောက၌ပါ တှရေ့လရှေိ့သော ယုံကွညျမှုမွငျ့မားသော ပညာတတျမိနျးမတဈဦးအဖွဈ မှနျတယျ ထငျရာကိုရဲဝံ့စှာလုပျကိုငျတတျမှု ၊ professional ဆနျသောပွုမူပွောဆိုဆကျဆံမှုမြားကွောငျ့ ပညာတတျအမြိူးသမီးအမြားစု၏ idol တဈဦးလညျးဖွဈသညျ။
မြိူးဆကျသဈအနုပညာရှငျမြား၏ လေးစားအတုယူခွငျးခံရသော အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈသလို သူမ၏ အပြိူ စငျဘဝ၌သာမက အိမျထောငျသညျဘဝ၊ မိခငျဘဝတိုငျအောငျရှညျလြားလှသော အောငျမွငျမှုမြားကွောငျ့ မွနျမာ့အနုပညာလောက၏ Evergreen ဟု သတျမှတျခံထားရသူလညျး ဖွဈသညျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗို၏ အောငျမွငျမှုအမွငျ့ဆုံးအခြိနျ၌မွနျမာ့ရုပျရှငျလောက၏ သရုပျဆောငျကွေးအမွငျ့ဆုံးမငျးသမီးဖွဈသလို ဇာတျဂြီးအမြားဆုံး မငျးသမီးမြားတှငျလညျးတဈဦးအပါအဝငျဖွဈသညျ။ ထှနျးအိန်ဒွာဗို၏အား သာခကျြမှာမတူညီသော ဇာတျရုပျပေါငျးမြားစှာကိုသဘာဝနှငျ့အနီးစပျဆုံးပုံဖျောသရုပျဆောငျနိုငျသလို ထူးခွားသောဇာတျရုပျမြားကိုလညျး စိနျချေါသရုပျဆောငျလရှေိ့သညျ။ သူမ၏ ကွာရှညျသောအောငျမွငျမှုသကျတမျး၊ပရိသတျအပျေါလှမျးမိုးမှု ၊ ထူးခွားသော အနုပညာအရညျအသှေးမြားကွောငျ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုမှာလညျး မွနျမာ့ရုပျရှငျရော ဂီတဘကျ၌ပါ မှတျတမျးတငျအပျသညျ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈသညျ။
ထှနျးအိန်ဒွာဗို၏ အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျရိုကျကူးခဲ့သော ရုပျရှငျကားမြား
၁၉၉၄- သူငယျခငျြးလို့ပဲ ဆကျ၍ချေါမညျခိုငျ
( ကြျောသူ မို့မို့မွငျ့အောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ကြျောရဲအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( စိုးသူ ရနျအောငျ မသေဉ်ဇာဦး ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
၁၉၉၇- ကွမှေသှားသော တိမျတိုကျမြားအကွောငျး
( ဒှေး ခြို ပွုံး ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
– သူတို့ခတျေနှငျ့ သူတို့အရှယျ( ကြျောသူ ရနျအောငျ ရဲအောငျ ကြျောရဲအောငျ လှငျမိုး
မို့မို့မွငျ့အောငျ မသေနျးနု စိုးမွတျသူဇာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို
– ရငျခှငျနနျးတျော ( ဒှေး ထှနျးအိန်ဒွာဗို နန်ဒာလှိုငျ )
( လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို နန်ဒာလှိုငျ )
– ကြှနျတျော ကြှနျမတို့သညျ
(ထှနျးအိန်ဒွာဗို မြိုးသန်တာထှနျး ရီဝယေံ အိန်ဒွာကြျောဇငျ)
( ရနျအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ရနျအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို လူမငျး )
( စိုးသူ မသေနျးနု ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိဖွူ စိုး )
( ရနျအောငျ စိုးသူ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( စိုးသူ ရဲအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို တငျ့တငျ့ထှနျး )
– မခဈြတတျသောမိနျးမ အခဈြငတျသောယောကျြား
( လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
– ကွညျပွာရောငျ နဂ်ဂတဈမြား
( ဒှေး လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို ထကျထကျမိုးဦး )
( မငျးမျောကှနျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို စိုးမွတျနန်ဒာ )
( ရနျအောငျ လူမငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို စိုးမွတျနန်ဒာ )
၂၀၀၂- သငျခဈြလြှငျ ကြှနျုပျမမုနျးပါ
– မပွောငျးလဲသော အကွောငျးတရားမြား
( လှငျမိုး နအေောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိန်ဒွာကြျောဇငျ )
– စပဈြခြိူ နှငျ့ခယျြရီဝိုငျ
( လူမငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို စိုးမွတျနန်ဒာ )
( ရနျအောငျ လူမငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို စိုးမွတျနန်ဒာ
( လူမငျး ခငျသနျးနု ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ရာဇာနဝေငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( လူမငျး သီဟတငျစိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို မသေနျးနု
( ဒှေး ထှနျးအိန်ဒွာဗို ကွညျလဲ့လဲ့ဦး )
( ရနျအောငျ ဒှေး ထှနျးအိန်ဒွာဗို နန်ဒာလှိုငျ )
– ညှို့သောပငျလယျ ဆှဲငငျသောလမငျး
( ဒှေး ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ဒှေး ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိန်ဒွာကြျောဇငျ )
( ဒှေး ကြျောရဲအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို မွငျ့မွငျ့ခိုငျ
– ယောကျဖတျောခါနီးရငျ စဉျးစားဖို့လိုတယျ
( ရနျအောငျ လှငျမိုး ရာဇာနဝေငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို
( ရာဇာနဝေငျး ဖွိုးငှစေိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိန်ဒွာကြျောဇငျ )
( မငျးမျောကှနျး ကြျောသူ ထှနျးအိန်ဒွာဗို ခြို ပွုံး )
( လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို မသေနျးနု )
( လှငျမိုး ထှနျးအိန်ဒွာဗို ခိုငျသငျးကွညျ )
– ဂုဏျရှိနျပွငျးတဲ့ ခဈြခွငျးသိက်ခာ
( ရနျအောငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ
( လှငျမိုး ဝဠေုကြျော ထှနျးထှနျးဝငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို
စိုးမွတျနန်ဒာ မြိူးသန်တာထှနျး ခငျဇာခွညျကြျော မွငျ့မွငျ့ခိုငျ)
( ကြျောသူ ဖိုးသောကွာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို မသေနျးနု
(ကြျောဟိနျး ကြျောရဲအောငျ စိုးမွတျသူဇာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို)
( ခနျ့စညျသူ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ရနျအောငျ ဟိနျးဝယေံ ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိန်ဒွာကြျောဇငျ)
( မွငျ့မွတျ မသေနျးနု စိုးမွတျသူဇာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( နတေိုး ရနျအောငျ သကျမှနျမွငျ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
– ဟတျထိတယျ ၂
( ရနျအောငျ ရဲအောငျ သူထူးစံ မိုးအောငျရငျ မသေနျးနု
ထှနျးအိန်ဒွာဗို သငျဇာဝငျ့ကြျော မိုးယုစံ )
( ခနျ့စညျသူ သကျမှနျမွငျ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ဟိနျးဝယေံ ရဲအောငျ မသေနျးနု ထှနျးအိန်ဒွာဗို
( ဟိနျးဝယေံ နအေောငျ နဝရတျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ဟိနျးဝယေံ ရနျအောငျ ရဲအောငျ စိုးပွညျ့သဇငျ
မသေနျးနု ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ပွတေီဦး ခနျ့စညျသူ ဝတျမှုနျရှရေညျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
– ခဈြစံအိမျ ၂၀၂၈
( လူမငျး ပွတေီဦး နတေိုး မငျးမျောကှနျး မွငျ့မွတျ
ထှနျးထှနျး နမေငျး ထှနျးအိန်ဒွာဗို အိန်ဒွာကြျောဇငျ
မိုးဟကေို ဝတျမှုနျရှရေညျ စိုးပွညျ့သဇငျ သငျဇာ
ဝငျ့ကြျော ခဈြသုဝေ )
– ရပျကှကျဘုရငျမ ၂
( မို့မို့မွငျ့အောငျ စိုးမွတျသူဇာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို
ခိုငျသငျးကွညျ အေးမွတျသူ )
( ကြျောထကျအောငျ စိုးမွတျသူဇာ ထှနျးအိန်ဒွာဗို
( ပွတေီဦး ပိုငျဖွိုးသု ထှနျးအိန်ဒွာဗို )
( ပွတေီဦး အိန်ဒွာကြျောဇငျ ထှနျးအိန်ဒွာဗို မကေဗြာ )
ထှနျးအိန်ဒွာဗို အနုပညာသကျတမျးတလြှောကျ ထှကျရှိခဲ့သော တေးစီးရီးမြား
၁. ကန်တာရကဖီး ( +ရငျဂို +အဲလကျဈ )
၂. ဆုံနိုငျခှငျ့ ( +အဲလကျဈ )
၃. သုံးယောကျစကား ( +တငျဇာမျော +မဒီ )
၄. မုနျးလို့မရတဲ့ခဈြသူ ( + ဒှေး )
၅. မကျြစိမှိတျပွီးခဈြလိုကျပါ ( +တငျဇာမျော )
၆. တကယျမခဈြဘဲနဲ့ ( + မြိူးကြော့မွိုငျ )
၁. အပိုငျးအစ ၁.၅
၂. အဖွူ ရောငျတမျးခငျြးသို့
၃. မိတော့မမိဘူး ( L ခှနျးရီ Live Show )
၆. Alphine သင်ျကွနျ
ထှနျးအိန်ဒွာဗို၏ အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျ ရရှိခဲ့သော ထူးခြှနျဆုမြား
၁. အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆု – နှောငျးတမွမွေ့ေ့ ( ၁၉၉၉ )
၂. အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆု – အမနေို့ဖိုး ( ၂၀၀၃ )
၃. အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆု – မိုးကုပျစကျဝိုငျးကိုကြျောလှနျ၍ ( ၂၀၀၅ )
၄. City FM 2002 – ရပေနျးအစားဆုံးအမြိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှငျဆု
၅. City FM 2003 – အရောငျးရဆုံးစတူဒီယိုတေးအယျဘမျဆု ( နှဈယောကျမရှိဘူး )
၆. City FM 2003 – ရပေနျးအစားဆုံး အမြိူးသမီးစ တူဒီယိုတေးသံရှငျဆု
၇. City FM 2004 – အရောငျးရဆုံး စတူဒီယို တေးအယျဘမျဆု ( ဒိုငျယာရီ )
၈. City FM 2004 – ရပေနျးအစားဆုံးအမြိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှငျဆု
၉. City FM 2005 – ရပေနျးအစားဆုံးအမြိူးသမီးစတူဒီယိုတေးသံရှငျဆျု။
သရုပျဆောငျ ပိုငျးမှာ အရမျးပီပွငျလှနျးလှတဲ့ မငျးသမီး တယောကျပါ။
မခိုငျကွီးသရုပျဆောငျခကျြတှကေို ကွိုကျကွရဲ့လား? သီခငျြးတှဟောလညျး ခုခြိနျထိ လူကွိုကျမြားရှငျသနျနဆေဲနျော ခဈြသေးရဲ့လား?
အောင်လအန်ဆန်နဲ့ တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာဓာတ်ပုံတွေကို တင်လိုက်တဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော်
သင်ဇာဝင့်ကျော်က နာမည်ကျော် အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ကြော်ငြာရိုက်စဉ်က ဓာတ်ပုံတွေကို ဒီနေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်) သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ အရပ်အမောင်းကောင်းပြီး ဖိုက်တင်မင်းသားပုံစံ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပြေပြစ်လှပသည့် နာမည်ကျော် သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့ရဲ ဓာတ်ပုံတွေက ပရိတ်သတ်များအတွက် အကြိုက်တွေ့စေသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၃ …
ကစ်ကစ် ကို အလှူငွေ (၁၉)သိန်း သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန်
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် အမြင်အာရုံချို့တဲ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် ကို သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန် နှင့် အလှူရှင်များက အလှူငွေ (၁၉)သိန်း နှစ်သောင်း ကျပ်တိတိကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ။ Photo from Tyron Bejay’s Facebook Unicode >>> ဆီးခြိုရောဂါကွောငျ့ အမွငျအာရုံခြို့တဲ့သှားပွီဖွဈတဲ့ …